Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ UK bụ Ọganihu Ohere Njikere
Ndi ochichi nke Briten na-elekwasị anya na ulo oru na-akpali akpali iji dozie oke onu ogugu onu ogugu kwa afo, ha ka kwuputala ugwo onu ego Bill 7 ka eweputara ndi oru mmepe. Nke a bụ ohere oge niile maka ụlọ ọrụ akụ na ndị investors.
Kedu ihe mere 100,000 ji daa adaba na mmepe ụlọ?
Ruo ọtụtụ afọ, ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-abanye n'ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ adịla ntakịrị, karịsịa nchịkwa, n'ihi ya, nkà ndị dị mkpa anaghị adị na mpaghara.
'Brick' dị umeala n'obi dị ntakịrị, ndị na-ewu ụlọ na-ahọrọ ihe dị mma, ọ bụghịkwa ihe kachasị mma!
Ndị na-ewu ụlọ ka ukwuu
Ulo oru nke ulo oru a na-acho ma ghota ya n'agbanyeghi na nke a abughi ihe di mkpa, ma o bu eziokwu na nnukwu ulo na-ewu ulo buru oke ala. Ndị nlekọta ahụ nwere ọrụ iji nweta uru dị ukwuu site na ala ha nke na-emechi nhọrọ ha.
Nwee usoro nhazi ngwa ngwa
Ndị na-ewu ụlọ na-ekwu na nke a bụ ihe kpatara na ha enweghị ike ịzụlite ọtụtụ ala ha nwere, ma nsogbu ahụ sitere n'eziokwu ahụ bụ na mmepe dị oke ma dị mgbagwoju anya ha na-agbanwe n'ụzọ zuru ụwa ọnụ ala dum na akụ na ụba akụ na mpaghara.
Anyị nwere azịza!